Macron: Howlgalka Turkiga ee waqooyiga Syria waa "hawlgal waalan" – Beegsonews-Wararka maanta
Home WARARKA MAANTA Macron: Howlgalka Turkiga ee waqooyiga Syria waa “hawlgal waalan”
Macron: Howlgalka Turkiga ee waqooyiga Syria waa “hawlgal waalan”
Beegsonews – Madaxweynaha Faransiiska Emmanuel Macron ayaa Jimcihii ugu yeeray howlgalka militari ee Turkiga ka wado waqooyiga Siiriya inuu yahay “mid waalan”, isagoo ku sheegay “bogiisa Twitter. isagoo sabab uga dhigey bixitaanka Mareykanka ee Syria “
“Sida qofkastaaba, waxaan ku bartay barteeda twitterka in Mareykanka uu go’aansaday inuu ciidamadiisa kala baxo,” ayuu yidhi Macron.
Isagoo ka hadlayey magaalada Brussels ka dib shir madaxeedka midowga Yurub, Macron wuxuu sheegay inuu doonayo France, Jarmalka iyo Britain inay abaabulaan kulan “todobaadyada soo socda” madaxweynaha Turkiga Recep Tayyip Erdogan.
Macron wuxuu carabka ku adkeeyay in dagaalyahanada ajaanibta ah ee ISIS oo laga yaabo inay ka cararaan xarumaha dadka lagu hayo ee Syria oo aada Ciraaq ay tahay in la qabto oo loo gudbiyo maxkamada halkaas.
Marka laga hadlayo dagaalyahanada isku dayaya inay aadaan Faransiiska, Macron wuxuu yiri, “Duulimaad toos ah kama imaaneyso xeryaha Siiriya ee ku wajahan Charles de Gaulle ee Paris.”
Macron wuxuu intaas ku daray in dagaalyahanada Faransiiska ee safka hore kaga jira kooxda ISIS, kuwaas oo laga yaabo inay ka gudbaan Turkiga marka ay ku sii jeedaan Faransiiska in la soo qaban doono oo lagu tijaabin doono Faransiiska, sida ku xusan borotokoolka iskaashiga u dhexeeya Faransiiska iyo Turkiga.
Turkiga ayaa weerarkiisa ka dhanka ah YPG ee Syria usbuucii la soo dhaafay ka dib markii madaxweyne Donald Trump uu ka noqday guuto Mareykan ah, wadada u xaareysa weerarka, furitaanka fur cusub dagaal sideed sano ah iyo ku qasbay 200,000 oo rayid ah inay cararaan.
Turkiga ayaa Khamiistii oggolaaday inuu joojiyo weerarkiisa Suuriya si loogu oggolaado ciidamada Kurdiyiinta inay ka baxaan “aag nabdoon” oo Ankara ay dooneysay inay maamusho.
Previous articleMacron: Turkish operation in northern Syria “mad”
Next articleCiidamada Somalia oo Sheegtey iney Al-shabaab ku laayay Gobalka Hiiraan .
warbixintii ugu danbeysay jabuuti COVID19